हङकङमा पनि त्यस्तो !- कोसेली - कान्तिपुर समाचार
आफू त यताको काल्र्सबर्गमा स्वाद बसेको मनुवा, उताको नाथे बियर बियरजस्तै लागेन । त्यो त खालि मुतको पैरो ! तैपनि प्राप्त उपलब्धिको हल्का उपभोग गरियो नै ।
वैशाख २९, २०७५ खगेन्द्र संग्रौला
काठमाडौँ — घरको सेरोफेरोको साँगुरो घेरोबाट बाहिर ननिस्केको महिनौँ भएको थियो । देशबाहिर दूर देशतिरका त कुरै नगरूँ । जीवन भूगोलको निसासलाग्दो लघु वृत्तको निरीह कैदी बनेको थियो, ट्वारट्वारे कुपमण्डुकजस्तो ।
देह सीमित भूगोलमा खुम्चिँदा मनको वृत्त पनि खुम्चिएको थियो । र, स्वभावत: किञ्चित् गिरेको थियो मेरो मनोबल पनि । कारण थियो— सृष्टिकर्ताको सुरुङमार्गको सानो व्यथा, ठूलो झमेला । यो व्यथालाई डाक्टरी भाषामा ‘प्रोस्टेट’ भनिदो रहेछ ।
एउटा ज्यानको नाथे एउटा प्रोस्ेटको अप्रेसन ती–तीनखेप गर्नुपर्‍यो । मानौँ— मेरो जिन्दगी नै प्रोस्टेटको निर्मम प्रयोगशाला हो ! अप्रेसन गर्‍यो, अलि दिनमा सुरुङमार्ग थुनियो । फेरि गर्‍यो, अनि फेरि अलि दिनमा थुनियो । हैट्, यो झुरपट्याँस अनि फेरि... । हेल्पिङ ह्यान्डस्, मेडिसिटी, मेडिकेयर । भोगवादी राजनीतिको औसरवादी खाओवादीले घरीघरी पार्टी फेरेझैँ आफू त सृष्टिकर्तालाई अघि लगाएर अस्पताल फेरेको फेर्‍यै । एनेस्थेसिया, रक्तश्राव र एन्टिबायटिकको असरा एकातिर, मनोवैज्ञानिक दबाब र बेचैनी अर्कातिर । कसोकसो देह र मन दुवै किञ्चित् थकित र गलित
भएका थिए । यस्तोमा हङकङले सङ्केतमा भन्यो— के बस्छौ एकबारको जुनीमा जीवनको सीमान्त कुनामा खुम्चिएर, एक्लिएर, विरक्तिएर ! एकाध दिन नै सही, हङकङको समुद्री हावा खान आऊ । के थाहा, ज्यान केही न केही तङ्ग्रिएला कि ! तै मन पनि पो चङ्गा होला कि † निम्ताको निहुँ थियो— पारिजात स्मृति दिवस, हावाजाजको टिकट र गाँस–बास–कपासको चाँजोपाँचो थियो हङकङ साहित्य परिषद्को । परिषद् बन्यो डाक्ने माध्यम, डाकिपठाउने कर्ता किसन राई, हाङयुग अज्ञात आदि ।
पण्डित लेखनाथ बाजेको हो कि कसको हो, सिलोकको एक पाउ याद आयो— मौका आउँछ पर्खँदैन, त्यसमा चुक्ने महालण्ठ हो । महालण्ठ नहुन यसो फेरफार गर्ने लँगौटी बोकेर ख्यालख्यालमै लागेँ म सुसेल्दै हङकङतिर । जहाजको टिकट सुस्त र लम्पट शाही चरित्र खासै नफेरिएको भूपू शाही नेपाल विमान सेवाको थियो । ट्रान्जिटमा सुले च्याप्यो र म ट्वाइलेट पसेँ । एक जना सुकर्मीले आफ्नो मित्रसँग भन्यो— ‘अरे, यो त पहिले हेरी कता हो कता सफा भएछ यार । गर्न खोजे किन हुँदैन ?’
मित्रले भन्यो— ‘हिजो श्रम विभागमा गा’थेँ । तीन घण्टामै काम बन्यो । पहिले झुलाएर, गलाएर, चाट्न खोजेर कम्तीमा तीन दिन लाउँथ्यो । हैन, थिति फेरिन लाग्या हो कि कसो ?’ यात्राको आरम्भमा यी दुई सुखद कुरा सुनिए । के यी सुखद कुरा गठेवामको सरकारका नवीन कृति हुन् ? ट्रान्जिट पनि पहिलेभन्दा व्यवस्थित र आरामदायी लाग्यो । जिज्ञासु दृष्टिले निरीक्षण गर्दै घुमेर हेरेँ— वाह, कुर्सीहरू पनि फेरिएछन् ! ती कति राम्रा ! कुन्नि, ट्वाइलेटको त्यो सफापन र बाहिरको यो सुधारको नेपथ्यमा पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको आदेशात्मक यत्नको हात पो हुँदो हो कि !जहाज उड्ने समय नेरनेर आयो । र, हङकङ जाने यात्रुहरूलाई बाहिर निस्कने द्वारको समीपमा डाकियो । एकाध गोरागोरीबाहेक सबै यात्रु नेपाली थिए । मनको एक कुनामा कतार जाँदाको यही ठाउँको सम्झना जीवन्त भयो । ती नेपाली यात्रु र यी नेपाली यात्रुलाई मैले आँखैआँखाले दाँजेर हेरेँ । तिनका अनुहारमा अनिश्चय र भयको अत्यासलाग्दो भाव थियो । ती यात्रुहरू मानौँ एकदमै बिरानो, अँध्यारो सुरुङ भएर जीवनको एकदमै अकल्पित यात्रामा जाँदै थिए । तर, यी हङकङे यात्रुहरू फरक थिए । झलक्क हेर्दैमा लाए–खाएका, सुकिला–मुकिला, फेसनदार र टिपटप । कति त गम्म दमाहा मार्काका भुँडी हालेका । जीवनसँग धेरथोर प्रसन्न र सन्तुष्ट । लाग्यो— हङकङमा नेपालीहरूको जीवनको दशा सायद उति दयनीय छैन ।
नभन्दै जहाजले शाही चरित्र देखाएरै छाड्यो । त्यो ठाँडो दुई घण्टा विलम्ब भयो । हङकङ टाइमको साँझ ६ बजेतिर मैले ट्याक्क रैथाने माटो टेकेँ । एयरपोर्टको कलेवरमा हङकङको अस्तित्वको लघुचित्र दृष्टिगोचर भयो । त्यो रहेछ— उत्तर र दक्षिण एवं पूर्व र पश्चिमको साझा ट्रान्जिट, चारै दिशाको एक संगम थलो । हङकङको समृद्धिकारी आर्थिक प्राणवायुको एक मुहान । त्यहाँ जता हेर्‍यो, आँखाको रमितै–रमिता । कति विशाल ! कति सफा ! कति व्यवस्थित † कति जटिल र परिष्कृत भौतिक संरचना !सेरोफेरो हेर्दैमा विस्मयले त्यसैत्यसै कहालीलाग्ने ।बाटो हेरिबसेका किसन राई आदि भेट भए । र, तिनाले मलाई तुफानी बसमा गन्तव्यतिर डोर्‍याए । भनेजस्तो होटल कतै नपाएर एउटा थर्ड क्लास चाइनिज होटलमा कोठा लिइएछ । कोठा भने झ्यालविहीन कैदखानाजस्तो, पैसो भने गतिलै होटलसरहको रे । सामान थन्क्याएर अल्प विश्रामपछि भोजनको सिकारमा हिँडियो । जहाँ पुगियो, त्यो त मलाई मिनी नेपालजस्तो लाग्यो । नेपाली रेस्टुरेन्ट, हेर्दैमा एकदमै साधारण । पाकपरिकारहरू पनि नेपाली सुगन्ध र स्वादका । ग्राहकहरू जम्मै नेपाली । तलामाथिको होटलका कोठा दुईवटा । दुवै कोठामा बियर र वाइनको खोलो
बगिरहेको । मलाई मधुमय मुस्कानसहितका नमस्ते थुप्रै आए । कति जनाले त भिँmझ्याट लाग्ने गरी मसँग सेल्फी ठोक्न पनि भ्याइहाले ।
कुरो बुझ्दा त्यो सानो भीड पोखरा र हङकङका उद्योग वाणिज्य संघका जनहरूको रहेछ । उद्योग वाणिज्य फाँटमा आदान–प्रदान र सहकार्य गर्ने क्षेत्र पहिल्याउन जुटेका रहेछन् ती । तिनको छोटे सभाका प्रमुख अतिथि रहेछन् हाम्रा महावाणिज्यदूत । एक त प्रमुख अतिथि, त्यसमाथि महावाणिज्यदूत । ठूलाबडाको ठूलै चाला । त्यतिका ससाना मानिसहरूलाई ती एक जना ठूलाले कुराउनुसम्म कुराए । आखिरमा देवदूतझैँ ती आए र सुरु भयो ती दुई पक्षको औपचारिक सभा । मनै नलागी डायसमा म पनि घिसारिएँ । सभामा एउटै कुरा मलाई बडो घत पर्‍यो । त्यो घतकारी कुरो पोखरा उद्योग वाणिज्यका अध्यक्षका मुखारविन्दबाट प्रकट भएको थियो । अध्यक्ष मिस्टर विश्व पालिखेले भने— भ्रष्टाचार नेपाली राजनीतिको भयंकर रोग हो । र, बडो मनोविनोदी काइदाले रोगको उपचारको सानो जुक्ति तिनले सुझाए । तिनले भने— पाँच सय र हजारका नोट खारेज गर्नुपर्छ । र, हुनेसम्म सानो मूल्यका नोट चलाउनुपर्छ । किन ? किनभने त्यसो गर्दा शासनको आसनमा बसेर घुस खाने भ्रष्टहरूले नोट कोठा भरिभरि थुपार्नुपर्छ । अनि गोप्यताको समस्याले गर्दा भ्रष्टाचारीका ओठ–तालु सुक्छन्, निद हराम हुन्छ । अनि पालिखे ब्रोले हाँस्दै भने— यसरी नेपालको भ्रष्टाचार आध्धै घट्छ ।
उद्योगवालेहरूको कार्यक्रम तुरियो, र अलिबेर खानपिनको सेसन चल्यो । कसैले वाइन ठाडो घाँटी लगाए, कसैले बियर लडाए । ज्यान पनि बियरको मोर्चामा सामेल भयो । आफू त यताको काल्र्सबर्गमा स्वाद बसेको मनुवा, उताको नाथे बियर बियरजस्तै लागेन । त्यो त खालि मुतको पैरो † तैपनि प्राप्त उपलब्धिको हल्का उपभोग गरियो नै । रातको १ बज्यो र किसन भाइहरू मलाई होटलमा छाडेर आ–आफ्ना गुँडतिर लागे । खल्ल नुहाएर घुप्लुक्क सुतेको के थिएँ, कसैले ढोका ढकढक्यायो । अर्को कोठाको ढोका होला भन्ठानेँ । ढकढक चर्को भयो र खोलेर हेरेँ । होटल मालिक्नी रहिछन् । आधारातमा के चाल हो यो ? म झस्केँ । कतै नगरवधू त होइनन् ? समाजवादको नक्कली लेप लगाइएको चिनियाँ निर्मम पुँजीवादमा नगरवधूको उत्पादन हलक्कै बढेको छ भनी कतै पढेको थिएँ । ती महिलाले हप्काएझैँ अभद्र लाग्ने स्वरमा केही भनिन् । सोचेँ— म्याम चिनियाँ भाषा बोल्दैछिन् । के भनूँ न के भनूँ, म त त्यसैत्यसै रनभुल्ल परेँ । ढोकाको चाबी बाहिरै छुटेछ, तिनले निकालिन् । र, फेरि कठोर ध्वनित हुने स्वरमा, चिनियाँ टोनमा अंग्रेजीमा भनिन्— ‘कि आउटसाइड नो गुड । कि इनसाइड गुड–गुड ।’ बल्ल कुरा बुझेर म लज्जित भएँ ।‘थ्याङ्क यु म्याम ।’
बिहान सात बजे उठेँ । किसनले मित्रमण्डलीमाझ बिहान मलाई चियापान गराउने र घुमाउने पालो बाँधेका थिए । पालोमा परेका ब्रो आठ बजे आउने कुरा थियो ।
आठ बज्यो, ती आएनन् । नौ बज्यो, ती आएनन् । किसनले मलाई लोकल जेबी फोनको चाँजो मिलाइदिएका थिए । दस बजेतिर बल्ल फोन आयो । पालोवाला गाइड रहेछन् । भने— ‘दाइ, आज विक एन्ड । हेर्नुस् न, यहाँको नियमले काम छाड्नै मिलेन । सरी, म आउन सकिनँ ।×’ आफ्नो त बिहान निद्राले छाड्यो कि कफी खाने बानी । कफी नखाई ज्यानका आँखै राम्ररी नखुल्ने । आफ्ना ओठ–तालु सुकिसके, गाइड गयल पर्‍यो । किसनलाई फोन गर्न मुख लागेन । काममा होलान्, व्यर्थै किन बिथोलूँ ? होटलवाली म्यामको काउन्टरसामु हाजिर भएर बिन्ती बिसाएँ— म्याम, यहाँ चिया–कफी हुँदैन ?‘सरी, हियर नो टी, नो कफी ।’बाहिर जाऊँ, बिरानो ठाउँमा हराउने डर । चिया–कफी खाने थलोको मेलोमेसो केही छैन । चिनियाँ जिब्राहरूको अंग्रेजी बुझे त मार्दिनु । होटल हरिपै हो, नाथे पानी उमाल्ने भाँडो र टीब्यागधरी
छैन । ल, आजलाई वाध्यात्मक निराहारी भइयो । पेटलाई किञ्चित् विश्राम प्राप्त भयो । किसन राईको फोन कुर्दै शिवानीसिंह थारूको ‘काठमान्डूमा एक दिन’ पढेर बसेँ । छाँटले यो गम्भीर पुस्तक हो । कोही पददलित, वञ्चित र अपहेलित किन आतंकको बाटोमा लाग्छ ? पुस्तकको थालनीतिरै यो प्रश्नको उत्तर खोज्ने यत्न गरेको छनक पाइन्छ । लेखनमा मिहिनेत गरेको पनि देखिन्छ । तर, पढाइले ठ्याम्मै गति लिँदैन । गोडमेल नपुगेको भाषा झारपातले भरिभराउ छ । घरीघरी झारपातमा आँखा ठेस लाग्छ । गम्भीर गैरआख्यान अडीअडी, घोत्लिई–घोत्लिई, बिस्तारै–बिस्तारै पढिन्छ । तर, आख्यान भने तुफानी वेगमा पढिन्छ । पठनको वेगमा जब ब्रेक लाग्छ, सम्प्रेषणको लय भंग हुन्छ । र, पठनको आनन्द ध्वस्त हुन्छ । अनि पाठकले कनीकनी किन पढ्छ ? कोही कसैको जड र नीरस खोस्टो कनीकनी पढिदिनकै लागि जन्मेको हो र ? तर के लाग्छ, साथमा अर्को पुस्तक थिएन । त्यसैले कनीकनी पढ्न म विवश भएँ । पछि पठन–प्रक्रियामा मेरो कनाइ नै थकित भयो र बीचैमा पढ्न छाडेर पुस्तक किसन भाइलाई सप्रेम उपहार टक्र्याएँ । पढ्न खोज्दै ब्रोले तर्क गरे हुनन्— बूढाले झारपातको जंगल छिचोल्न नसकेर पो उपहार टक््रयाएछन् कि !
दुई दिन रसिक र प्रेमिल गाइड ब्रोहरूका पछि लागेर हल्लिँदै, हङकङका नानाओली दृश्यावली हेर्दै बिते । चौहत्तर साल इतिहास भयो, पचहत्तर सालको ढोका उघ्रियो र कार्यक्रमको दिन आयो ।
अलि ठूलो हल खोजेको, पाइएनछ । र, जो पाएको कामचलाउ सानो हल लिइएछ । आयोजकहरू हुनुसम्म चिन्तित थिए । तिनले घरीघरी गाइँगुइँ कुरा गरेको मैले सुनिरहेँ । फलानाका कुरा सन्न मान्छे थुप्रो आउलान् । प्रशंसक पन्,ि निन्दक पनि । तिनले आसन नपाएर खडेखडे हल्ला गर्लान्, र कार्यक्रम फ्याँ पो होला कि †
हङकङमा गर्नलाई काम छ, र जीवन एकदम व्यस्त छ । अतिकता फुर्सद हुने समय केवल सूर्यास्तपछि रहेछ । त्यही भएर रैथाने चलनअनुसार कार्यक्रम साँझ सात बजे तोकिए छ । आधा घण्टा विलम्ब गरी कार्यक्रम थलोमा पुग्दा अरे, चिताएझैँ मान्छे त छैनन् ! छन् त जम्मा त्यही लिन्ठिङ्ग बाह्र–पन्ध्र जना । आधा घण्टा कुरियो र चालीस–पैँतालीस जना अटाउने फुच्चे हल ठिक्क भरियो । ‘खै त मान्छे ?’ एक जानिफकारलाई खुसुक्क सोधेँ ।‘दाइ, एमाले र माकेजन आएनन् ।’‘कारण ?’
साउती गर्दै ती मान्यजनले कुरो खुलाए । बुझेर ल्याउँदा कुरो त गाँठ्ठे, गहिरो न गहिरो पो रहेछ † यता नेपालमा जीवनको उजाड बगरमा कुरै कुराले ढकमक्क फूल फुलाउने स्वप्नजीवी गठेवाम सत्तामा छ । उता हङकङवासी एमाले एवं माकेमार्गी कँणहरू त मेरीबास्सै, शासक कमरेडहरूका पवनपुत्रजस्ता पो भएछन् † सत्ता, शक्ति, पैसा र सानका सामु विचार र कलालाई बाल नगन्ने । भिन्न मत राख्ने जीवको मुखै नहेर्ने, ऊसँग बातै नमार्ने । अनि किन आउँथे ती प्रियजनहरू बित्थामा कुन्साङ काकाको फुस्रो मुख हेर्न र उसका खस्रा र रुखा कुरा सुन्न ? सभाकक्षको आकार र क्षमता हेर्दै कृतज्ञभावले मैले मनमनै भनेँ— धन्य हुन् एमाले एवं माकेका अन्तर्यामी कँणहरू † अन्तर्दृष्टिले आसनको अभाव देखेर कार्यक्रममा ती अनुपस्थित भइदिए । र, पारिजात दिदीको स्मृति–कार्यक्रम शान्त र सौम्य वातावरणमा ट्याक्क सम्पन्न भयो ।
हङकङमा नेपाली समुदायको आभूषणतुल्य दुई लेखक छन्— हाङयुग अज्ञात र देश सुब्बा । नेपाली साहित्यमा राम्ररी चिनिएका । हङकङे नेपाली साहित्यको सगर थाम्ने दुई खम्बा । हाङयुग परे स्वयम् एक आयोजक, उनी त कार्यक्रममा हाजिर हुने नै भए । देश सुब्बाको भने नाक–मुख देखिएन । कार्यक्रममा कताकता के–के रिक्तताजस्तो, खल्लोखल्लो लाग्यो मलाई । छेउका उनै जानिफकारलाई सोधेँ— ‘खै देश सुब्बा ?’‘माथि’, चोर औँलाले माथि संकेत गर्दै मिस्टर ब्रोले भने ।माथि ? अरे, देश सुब्बा त गएछन् कि कसो ? म झस्केँ ।‘कहाँ माथि ?’
ब्रोले छोटोमा छिटो कुरो बुझाए । कुरो त यो पनि एक छाँटको रहेछ ! देश सुब्बालाई आख्यानमा आँखा लाग्न छाडेछ । आखिर के हो यो नाथे तरंगी कल्पना लोकको पानीको फोको, जो हुत्त उठ्छन्, प्याट्ट फुट्छन् र फुस्स सकिन्छ ? यस्तो सोच्दै देश सुब्बा माथि उठेछन् । माथि अर्थात् गहन दर्शनको गरिमामय उचाइमा । उनी आफैँ आफूलाई दार्शनिक मान्दा रहेछन्, र पल–प्रतिपल भयवादको तोत्र जप्दा रहेछन् । उता एमाले एवं माकेका कँणहरू त्यस्ता छन्, यता देश सुब्बा यस्ता छन् । मखलेल हुँदै म मनमनै हाँसे— हैट्, हङकङको नेपाली समुदाय त खतरा पो रहेछ बा !कार्यक्रम भयो । पुष्पगुच्छा, खादा र प्रशंसाका वचनहरूले पारिजात दिदीको सम्मान र सम्झना गरियो । दिदीको विचार र सिर्जनाका मोडहरू र क्रमभंगहरूको चर्चा भयो । पददलित भुइँमान्छेहरूसँगको सहजीवन, विचार, कला र अभियानद्वारा तिनको जागृतिको चेष्टा, तिनको मुक्तिकारी क्रान्तिको परिवेश निर्माण, महिलागणको स्वत्व र अस्मिताको दाबी, निरन्तरको वैचारिक हस्तक्षेप— हो, पारिजात दिदीले छोटो जीवनमा के मात्र गरिनन् ? र त उनी आफ्ना कृति र कर्महरूमा सतत जीवन्त, प्रेरणादायी र अमर छिन् । बस्, दिदीको सम्झनामा कुरा यस्तैयस्तै भए ।
आयोजक संस्था रहेछ बडो युवा–अनुरागी । सालिन्दा एक युवा प्रतिभालाई पुरस्कार दिँदो रहेछ त्यो । यो सालको पुरस्कार सुनिता गिरीलाई दियो । पुरष्कृत कवितासंग्रहको नाम ‘माइत जाने बाटो’ । बस्, अबलाई कार्यक्रम तुरियो र नजिकैको नेपाली रेस्टुरेन्टमा उमंगसाथ खानपिन सुरु भयो । रात छिप्पिसकेको थियो । हत्तपत्त गाँस टिपेर घुप्लुक्क सुत्न मन थियो मलाई । तर ब्रोहरूले छिट्टै सुत्न दिने छाँट देखिएन । आफू परियो निम्तालु अतिथि, निद्रालु थकानलाई दबाएर सबैका कुरा सुनिदिनुपर्ने । घरदेखि धेरै परको हङकङमा थकित ज्यानलाई जेमा रुचि थिएन, वार्ताले त्यतैतिर फन्को मार्‍यो । एक जना मित्रको अद्भुत संस्मरणमा मान्यवर खड्गप्रसाद शर्मा ओली झुलुक्क उदाए । परराष्ट्रमन्त्री छँदा ओली सर चीन घुमेर खुत्रुक्क हङकङ झरेछन् । मौकाको कुरा हो, फाँटवाले मन्त्रीसमक्ष एउटा निवेदन प्रस्तुत गरिएछ । निवेदनमा व्यंग्यको पुट राखेर भनिएछ— श्रीमान्, नेपाल यसै पनि जातीय विविधतायुक्त देश । तर, हङकङको महावाणिज्यदूतमा एउटै जातको
सदावहार एकाधिकार छ । नपत्याए जनी गरेर नजर होस् मान्यवर— जैनेन्द्र जीवनपछि हेमलाल भट्टराई, माधवप्रसाद घिमिरेपछि विनोदकुमार उपाध्याय, महेशप्रसाद दाहालपछि केशव भट्टराई । सबै पवित्र ब्राह्मण ! यति पवित्र पद बुद्धिबिनाको अपवित्र जनजातिलाई दिन त नमिल्ला नै । कमसेकम क्षत्रीलाई त दिइयोस्, महामहिम ! यो दुश्चक्र तोडिएपछि अरूको पनि पालो आउला कि ? ओली ब्रोका करकमलमा निवेदन टक््रयाउन पाएकोमा निवेदकहरू मक्ख गरे । तर पछि उल्का भयो । ओली सर बाटो लागेपछि निवेदन जहाँको तहीँ डस्टबिन उर्फ रद्दीको टोकरीमा फेला पर्‍यो । र, बरा दुखिया निवेदकहरू हुनुसम्म मर्माहत भए । यो विद्रूप विषयलाई थान्को लगाउन मैले नयाँ प्रसंग झिकेँ । भनेँ— हिजो जे भो, त्यसलाई बिर्सिदिऊँ मित्रहरू । आजका कुरा गरौँ । आज श्रीमान् ओलीको सर्वत्र एकाधिकार छ । खबरमा
एकाधिकार, चर्चामा एकाधिकार । प्रशंसामा एकाधिकार, निन्दामा एकाधिकार । स्तुतिमा एकाधिकार, कटाक्षमा एकाधिकार । यत्रतत्र, सर्वत्र एकाधिकारै एकाधिकार । यो ओलीमय एकाधिरबारे हङकङ के भन्दो हो जी ?टेबुलको पल्लोछेउको एक शान्त श्रोता हठात् क्रुद्ध भयो । उसको उद्वेलित मुड्की टेबुलमा ड्याम्म बज्य्रो । र, उसको मूक गर्जन वायुमण्डलमा विस्फोट भयो, ‘हैट् सोल्टी, डस्टबिनका चैँ कुरै नगरूँ ल !’
प्रकाशित : वैशाख २९, २०७५ ०९:३०